Va Farai Maguwu Vanoendeswa kuChitokisi cheku Harare
Mukuru weCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu, vaendeswa nehurumende kuHarare kuti vanobvunzurudzwa pamusoro pegwaro ravakaburitsa richitaura kuti zviuru nezviuru zvemangoda zviri kubiwa kubva kuminda yemangoda kwaChiadzwa.
Gweta raVaMaguwu, VaTinoziva Bere, vati VaMaguwu vazonyoreswa warned and cautioned statement uye nyaya yavari kupomerwa yachinjwa. Hurumende yanga ichiti VaMaguwu vakanyora manyepo pamusoro pemangoda mumagwaro avakapa nhumwe ye Kimberly Process mu Zimbabwe, Va Abbey Chikane.
VaBere vati hurumende yava kuti gwaro rakaburitswa naVaMaguwu nesangano ravo raiva nemanyepo oga oga, isingataure nezvaVaChikane. VaBere vati mapurisa akazobvumidza VaMaguwu kuti varapwe neSvondo, asi vati havasati vava neruzivo kuti vachaenda kudare rinhi.
Ivo VaChikane vaudza Studio7 kuti manyepo kuti vainga varonga kusungisa VaMaguwu. VaChikane vati kunyange hazvo vakaita musangano wakanaka naVa Maguwu, VaMaguwu vakavapa magwaro anonzi akabiwa ku Joint Operations Command, zvinova zvakavaisa panguva yakaoma nehurumende.